धार्मिक कार्यमा किन बजाइन्छ शंख ? मुटु रोग निको पार्ने शंखको ध्वनीको अरु के के छन् फाइदा ?
६ श्रावण २०७६, सोमबार १७:२३
रोहित शर्मा । शंख दुई संस्कृत शब्दहरु “शम“ र “खम“ जोडिएर आएको हो । शम जसको अर्थ केहि राम्रोलाई जनाउँछ भने खम भन्नाले पानीलाइ जनाउँछ, जसको पुरा अर्थ पवित्र जल हो। भनिन्छ शंख शब्द शंखराबाट पनि आएको हो, शंखरा अर्थात शंख फुक्ने व्यक्ति । हिन्दु तथा बौद्ध धर्ममा शंखलाई धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ। विशेषगरी हिन्दू धर्ममा शंखलाई भगवान विष्णुको प्रतीकको रूपमा वर्णन गरिएको छ। सामान्यतया शंख दुई प्रकार हुन्छन्, एक जसबाट ध्वनि निकालिन्छ र अर्को जसलाई पूजाको उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ।
जब स्वास प्रस्वासलाई नियन्त्रणगरी यसलाई फुकिन्छ वा यसबाट ध्वनी निकालिन्छ । “ओम“ को पूर्वीनर्धारित आवाज उत्पन्न हुने गर्छ । ओम जसलाई वेदहरु मूलभूत विषय मनिन्छ । भनिन्छ, वेदहरुमा समाहित सबै ज्ञान ओम ध्वनिको एक विस्तृत वर्णन हो। यसको ध्वनिको कम्पनले सकारात्मक मनोवैज्ञानिक भावना जस्तै साहस, दृढता, आशा, शक्ति र आनन्दको महसुस गराउँदछ, जसलाई स्वयम् बजाउनेले पनि आभास गर्ने गर्छ। यसको ध्वनिको कम्पनले वातावरणमा उर्जाशक्ति, आनन्द र चैतन्य बनाउँछ, जसका कारण नकारात्मक उर्जा आफैँ निस्क्रिय भएर जान्छन् । त्यसैगरी यसबाट आएको ध्वनिले वातावरणमा भएको किटाणुसमेतलाई नष्ट गर्ने गर्छ, जसलाई प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे.सी. बोसले पुष्टि गरेका छन् ।
शंख बजाउनुका फाइदाहरु :
१) भकभकाउने बच्चाले नियमित शंख बजाउँदा उसको यस्तो समस्या निर्मुल भएर जान्छ। २) यसलाई नियमित फुक्दा वा बजाउँदा हृदयमा भएका अवरोधहरु हट्नेछन र यसले स्वास प्रशासलाई पनि सुधार गर्दछ।
शंख भित्र पानी राखी रातभर छोड्दा, त्यस पानीबाट हुने फाइदाहरु : १) त्यस पानीलाई भोलिपल्ट छालामा मालिस गरे छालाको रोग, एलर्जी आदिको उपचार हुने गर्दछ, साथै छालामा भएका सेता दाग समेत हट्ने गर्छ। यस प्रक्रियालाई महिना दिनसम्म नियमित अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
२) यदि त्यस पानीमा गुलाब जल मिसाएर आफ्नो केशलाइ धुँदा कपालको प्राकृतिक रंग आउने गर्दछ। ३) पेटका समस्या भएका व्यक्तिहरुले नियमित रुपमा १÷२ चम्चा त्यस पानीलाई पिउँदा त्यस्ता समस्याहरु निर्मुल भएर जान्छन् । ४) सुत्नु अघि ५ मिनेट सम्म शंकले आफ्नो आँखाको तलको भागमा बिस्तारै मालिस गरेमा डार्क सर्कलहरु हराउने गर्छन् ।